Kismaayo News » Warlugeed:Beesha Absame oo Afka isla Dhaafsan!
Warlugeed:Beesha Absame oo Afka isla Dhaafsan!
Waad kala baaddeen barnaamijii Xiisaha lahaa ee Warlugeed. Waxaa Astaan u ahayd Warlugeed inuu noqdo qormo aadan ka heli doonin meel kale.
Waxaan maanta ku falanqeyneynaa qormadan arimo xasaasi ah oo dib kasoo bixi doona balse hadda dusha ka dadan waana su aashii aan Horey KismaayoNews ugu soo bandhigney oo ahayd Alshabaab waa loo darsandoonaa. Nuxuruka qormadani waxaa weeye laba qodob:
1- In xaalka Soomaaliyeed iyo xalinta mashaakilaadkeedu uu ka fogyahay xal qabiil.
2- In saansaanta Jubooyinka ka socota ay tahay Falaadh cirka ku maqan, dhibaato ku keeneysa beesha Absame ugu horeyn, saansaantiiniina bilaabatay
Siyaasadda ka socoto gonolada jubooyinka ayaa u muuqata mid la eedi doono lagana sheekeyndoono haddii aan xal dagdag ah loo helin. Sababtu waxaa weeye waxaa meesha ka baxay ugu horeyn waxii Soomaali wada lahayd isku xidhayahay oo ahaa diinta Islaamka waana middii lagu caana maalay inta aysan Alshabaab xoog sheeganin. Alshabaab iyaga dib ayaan ugu soo laabandoonnaa balse aan ka socono.
Maanta iyo xaalku sida uu yahay waxaa weeye dhawr nadaam, dhawr kooxood iyo dhawr dawladood oo kala dan iyo dabeecado ah. Dhibaatadu ma ahan iney iyagu kala socdaan oo midwalba rabo dantiisa, balse ayaandarrada ayaa ah iney wataan Kooxo isku beel ah mid walbana dhagta wax loogu sheego, loona sheegey inuusan midka kale waxba ka maqal ama uusan la hadlin.
Taasi waxey keentey in aftuur iyo rasaas la isku soo feysto taasoo u muuqata mid kasoo dagdageysa xilligii lagu wadey oo ahaa marka Kismaayo la isla tago.
Sidaan ka warheyno waxaa jubooyinka ka dagaalama saddex ciidan oo hubeysan:
1- Ciidamada TFG
3- Ciidamada Kenya
Ciidamadan way iska garabdagaalamayaan waxayna leeyihiin hal cadaw oo ah maanta Alshabaab balse ma jiraan colaad muuqata iyo cadho dhextaalla askartan iyo masuuliyiintan. Dhawr dagaal ayay wada galeen kuwana way wada sugayaan illahayna ayaana og meesha xaal ku danbeyn doono.
Kasoo gudub, Ciidamadan oo dhan waxaa saadka siiya dawladda Kenya iyagaana ah dawladda ugu dhaw ee ka warheysa ciidamadan, amra waxna usheega. Balse waxaa iyana garabsocda qorshe kale oo caalami ah oo ku xidhan AU, AMISOM iyo IGAD oo ka warhaya hawlahan Soomaalida gaar ahaan gobolada Jubooyinka iyaguna dhankooda waxay wax usheegaan dawladda kenya. Bal aan u kaadino dawladaha kalee aan eegno dhanka Soomaalida dhexdeeda siday u arkaan:
Inkastoo waqtigeedu laalaado, Sheekh Shariif waxuu rabaa in AMISOM lagu wareejiyo Kismaayo mana arki karo nadaam kale oo aan isaga aheyn iyo sida uu urabo Jubooyinka.
Dr Cabdiwali waxaa la sheegaa inuu aaminsanyahay in maamul goboleed loo sameeyo jubooyinka lana raaco qorshe hore oo Cabdullaahi Yuusuf ka tagay oo usameeyey Jubooyinka walina raadad badan ka muuqdaan. Taas waxaa ku raacsan Cabdiwali Cabdiraxmaan Faroole oo isagu aaminsan hawshaas iyo in la meelmariyo goaankii Cabdullaahi Yuusuf maamul loo sameeyo.
Su aasha xigta een aan rabno inaad si wanaagsan udhuuxdo ayaa nadaamyada hadda ku mashquulsan iyo kuwa ka fikiraya Jubooyinka xaggee xaalkooda iyo siyaasaddoodu tahay. Kama fursaneyno marka inaan soo qabano Azaniya iyo Kaambooni:
Labadan Kooxood waa hal beel waxayna ku mideysan yihiin in Alshabaab laga qaado Jubooyinka midwalbana uu rabo inuu sameeyo maamul la xidhan Adduunka iyo caalamka balse WARLUGEED waxuu aaminsanyahay ninkii dadkiisa qancin waaya inuusan meela gaadhi doonin. Haddaba sidee wax wadaan raggan laftigoodu?
Baadhitaan kooban iyo daraasad aan kusameyney rabitaanka labada kooxood ayaa waxaa noo soo baxdey in labada kooxoodba ay ku xisaabtamaaan awood aysan lahayn ee loo hayo ama ninkale ku jirta. Iyadoo sidaas ah ayaa haddana waxaa mararka qaar la arkaa dhibaato iyo colaad aan loo baahnayn oo ay dhexdhigeen dadkii shalay walaalaha ahaa.
Qaybta labaad ayaan ku sharaxi doonaa hamiga iyo rabitaanka labada nin ee ugu sareysa Gaandi iyo Axmed Madoobe iyo waliba taageerayaashooda dal iyo dibadba. Xasuuso nuxurku waxaa weeye, Wax Islaanimo ahayn Soomaali ma mideyn karo! Waxaad lasocotaan qormadeena labaad oo soo bandhigi doonta sawirka iyo siyaasadda dhabta ah.